ကိုနိုင်း - ရှစ်လေးလုံးနှစ်သုံးဆယ့်ပြည့်ကာရန်များ
on August 23, 2018 သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ - Articles Ko Naing
ပြတင်းတံခါးအဖွင့် ဇာခန်းဆီးအလွင့်( ၇၄ )
(သစ်ခက်သံလွင်) သြဂုတ် ၂၃၊ ၂၀၁၈
ဒီသြဂုတ်လမှာ ရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံကြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ နှစ်သုံးဆယ် ပြည့်မြောက်ခဲ့ရပါပြီ။ မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့တော့ ဘယ်လိုမှမေ့ဖျောက်လို့မရနိုင်တဲ့နေ့တနေ့ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သုံးဆယ်၊ သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့မှာ တတိုင်းပြည်လုံးပါဝင်ပြီး တပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကို တော်လှန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီတပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကို စတင်တော်လှန်ဖို့ဦးဆောင်ခဲ့ကြတာကတော့ ကျောင်းသားတွေပါပဲ။
၁၉၈၈ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့မှာ အစပြုခဲ့တဲ့ တပါတီအာဏာရှင်ဝါဒကိုကိုင်စွဲထားတဲ့ မဆလပါတီကိုဖြုတ်ချ နိုင်ရေးဟာ အရှိန် အဟုန်မြင့်မားလာပါတယ်။ ၁၉၈၈ ဇွန်လကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေကတဆင့် ၁၉၈၈ သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့မှာတော့ လူထုအရေးတော်ပုံကြီး ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီလူထုအရေးတော်ကြီးပေါ်ပေါက်လာအောင်ကြိုးပမ်းကြတဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ မောင် မောင်ကျော်၊ မင်းကိုနိုင်၊မင်းဇေယျ၊ ကိုကိုကြီး၊ မိုးသီးဇွန်၊ ဌေးကြွယ်၊ မိုးဟိန်း၊ သက်ထွန်း၊ ဇော်မင်း (အာဗြဲ)၊ ညိုထွန်း၊ တင်အေးတို့ဟာ မြန်မာ့သမိုင်းမှာရေးထိုးနိုင်ခဲ့သူတွေပါ။
ဒီရှစ်ဆယ့်ရှစ် လူထုအရေးတော်ပုံကြီးကို ရေးဖွဲ့ခဲ့ကြတဲ့ကဗျာများစွာလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ကနေ အခုအချိန်ထိ ရေးဖွဲ့နေကြတုန်းပါ။ ရှေ့ဆက်ရေးဖွဲ့နေကြဦးမှာပါပဲ။ ရှစ်လေးလုံးအမှတ်တရနေ့မှာ ရေးဖွဲ့နေကြတဲ့ ကဗျာတွေကိုကြည့်ရင် ပြည်သူတွေကိုစစ်အာဏာရှင်တွေက ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ် ခဲ့တာတွေကို ကြေကွဲစွာ၊ ပြန်အမှတ်ရအောက်မေ့စွာ ရေးဖွဲ့နေကြရပါတယ်။
မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီလမ်းမပေါ်ရောက်အောင် ရှစ်လေးလုံး လူထုအရေးတော်ပုံကြီးက သွေးတွေ၊ အသက်တွေ၊ ဘဝတွေရင်းပြီး လမ်းစကိုခင်းခဲ့ရပါတယ်။
အခုရှစ်ဆယ့်ရှစ်နှစ်သုံးဆယ်ပြည့်မှာ ရေးဖွဲ့ကြနေကြတဲ့ ခေတ်ပေါ်ကဗျာတွေထဲမှာ ကဗျာဆရာဝင်းမင်းစိုး (မိတ္ထီလာ) ရေးတဲ့ ”သွေးနဲ့ရေးတဲ့ကဗျာ” မှာ ဖတ်ကြည့်ခံစားနိုင်မှာပါ။
ရှစ်ဆယ့်ရှစ်လူထုအရေးတော်ပုံကနေ လျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းတွေဟာ အလွန်ကြမ်းတမ်းခက်ထန်ပါတယ်။ ခက်ခက်ခဲခဲကျော်ဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။ လူထုအရေးတော်ပုံကြီးမှာ အသက်တွေ၊ သွေးတွေရင်းခဲ့ရပါတယ်။ ၈၈ ကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ၊ နိုင်ငံရေးသမား ခေါင်းဆောင်တွေဟာ စစ် အာဏာရှင်စနစ်လက်ထက်မှာ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေ များပါတယ်။ ၈၈ ကစခဲ့တဲ့ လူထုအရေးတော်ပုံ ကြီးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင် မြန်မာပြည်တပြည်လုံး ငရဲပြည်ရောက်နေရသလို အော်ဟစ် ဆူညံသံတွေ ပြန်ကြားနေရပါတယ်။
ဒေါင်းအလံကိုလွှင့်တင်လိုက်တာနဲ့ လမ်းတွေက သွေးသံရဲရဲနဲ့ ကုန်းထလာတယ်။
ကဗျာဆရာ ”စိုးခိုင်ညိန်း” ရဲ့” ကြာကြာတင်းတင်း ဆုပ်ခြေလိုက် တော့ လက်ထဲကမီးခဲဟာကြေမွပြီး သေသွားတယ်” ဆိုတဲ့ကဗျာ ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် ငရဲပျက်ဖွယ်အော်သံတွေကို ပြန်ကြားရ မှာပါ။ သွေးတွေဟာ မီးတောက်မီးလျှံတွေလိုလမ်းမတွေပေါ်မှာ စီးဆင်းနေတဲ့မြင်ကွင်းတွေကို ကြေကွဲဖွယ် မြင်လိုက်ရပါတယ်။
သတိရတိုင်း ဒါကို မီးထွက်အောင်ပွတ်နေမိတယ်
အဲဒီမီးနဲ့ ခင်ဗျားတို့ တနေ့လောင်ကြဦးမှာပါ
ရှစ်ဆယ့်ရှစ်လူထုအရေးတော်ပုံကြီးအကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားတွေးမိတိုင်း အမြဲအမှတ်ရကြေကွဲစရာတွေ၊ မခံမရပ်နိုင်အောင် မကျေနပ်မှုတွေ ရှိ သလို၊ တက်ကြွနိုးကြားတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။
ဘယ်တော့မှမမေ့ပျောက်တဲ့ခံစားမှုမျိုးစုံ ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ ၈၈ အရေးတော်ပုံမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေ အခုသက်ရှိထင်ရှား ရှိနေပါသေးတယ်။ မသေပဲရှိနေသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ အမာရွတ်ကိုယ်စီ ရှိနေကြမှာပါ။ ၈၈ သြဂတ်လဟာ တစ္ဆေတစ်ကောင်လို ခြောက်လှန့်နေမယ်ဆိုတာကို ကဗျာဆရာ ”ထက်လူအောင်” ရဲ့ ”သြဂုတ်ဟာ မိုးတွေလိုရွာတယ်” ဆိုတဲ့ ကဗျာက ပြောပြနေပါတယ်။
ကဗျာက မဆလခေတ်ကိုပြန်မြင်စေပါတယ်။ ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာတွေက မဆလပါတီရဲ့ တံခါးပိတ် စီးပွားရေးစနစ်ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတာတွေ၊ တပါတီအာဏာရှင်ကြီးနဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေသာ ချမ်းသာခဲ့ကြတဲ့ခေတ်ကို ပြန်မြင်နေမိပါတယ်။ မဆလတပါတီအာဏာရှင်စနစ်လက်အောက်မှာ ပြည်သူ တွေ၊ လူငယ်တွေဒုက္ခတွေ စီးပိုးထမ်းထားခဲ့ရတာပါ။
လက်သီးကိုလေထဲဆန့်ထုတ်ဖို့သာ တွေးခဲ့သူတွေကို လူမသိသူမသိ မြေကြီးထဲတိုးဝင်ခဲ့သူတွေကို
မေ့ချင်ယောင်ဆောင်နေသူတွေအတွက် သြဂုတ်ဟာ ထမင်းလုံးတစ္ဆေ။
သြဂုတ်လဟာ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတော့ ဘယ်သောအခါမှမေ့လို့မရနိုင်တော့ပါဘူး။ ၈၈ မှာ လွှင့် ထားခဲ့တဲ့ ခွပ်ဒေါင်းအလံကို စစ်အာဏာရှင်တွေရှိနေသမျှ လွှင့်ထူရင်း တိုက်ပွဲဝင်နေရဦးမှာပါပဲ။
ဆုပ်ထားတဲ့လက်သီးတွေကို ဖြည်မသွားနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါတွေကတော့ အာဏာရှင်တွေအတွက် ထမင်းလုံးတစ္ဆေခြောက်လှန့်နေတာပါပဲ။ အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာ တိုင်းပြည်ဟာ ရုန်းကန်နေရတုန်း ပါပဲ။ အာဏာရှင်စနစ်ကရေးဆွဲထားတဲ့ ၂၀၀၈ အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်မှာ အာဏာရ အရပ်သားပါတီကို ဒီမိုကရေစီအတုပေးပြီး ချုပ်ကိုင်ထားတာပါ။
လုပ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရတဲ့အရပ်သားအစိုးရဆိုတာကလည်း ပြည်သူတွေအကျိုးစီးပွားကို မလုပ်ဆောင် နိုင်သေးပါဘူး။ ပြောင်းလဲရမည်ဆိုပေမယ့် ဘာတွေပြောင်းလဲခဲ့သလဲ၊ ဘာတွေမပြောင်းလဲတာလဲဆိုတာ ကို ကဗျာဆရာ”လူမျိုးလွင်” ရေးပြသွားခဲ့တဲ့ ”၈၈၈၈” ကဗျာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
ကျွန်တော်ဟာ ၂၁ နှစ်သားကလေး
ခုချိန်မှာတော့ ၅၁ နှစ်သားကြီး
နှစ်ပေါင်း ၃၀ ပြည့်ခဲ့ပြီ
… … …. … … …ပြောင်းသွားတယ်။
အခုရှစ်ဆယ့်ရှစ်နှစ်သုံးဆယ်ပြည့်တဲ့အခါ ဘာတွေပြောင်းလဲခဲ့သလဲ၊ ဘာတွေမပြောင်းလဲဆိုတာကို ပြည်သူတွေအားလုံး သိနေကြမှာပါ။ မြန်မာပြည်မှာ အဓိကအုပ်ချုပ်နေတာကိုကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၈၈ လူထုအရေးတော်ပုံဖြစ်ပြီး စစ်အာဏာရှင်တွေက ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း စစ်အာဏာနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။ အခုနှစ်သုံးဆယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်က မထွက် နိုင်သေးပါဘူး။ နှစ်သုံးဆယ်ပြည့်အချိန်ကစပြီး စစ်အာဏာရှင်လောင်းရိပ်အောက်က တွန်းထွက်နိုင်ဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်လူထုအရေးတော်ပုံလိုအုံကြွတွန်းလှန်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ပြည်သူတွေအားလုံးမှာ တာဝန်ရှိနေပါပြီ။
၁။ ဝင်းမင်းစိုး(မိတ္ထီလာ)၊ သွေးနဲ့ရေးတဲ့ကဗျာ၊ လွတ်လပ်လှိုင်း အွန်လိုင်းမီဒီယာ၊ သြဂုတ်လ ၂၀၁၈။
၂။ စိုးခိုင်ညိန်း၊ ကြာကြာတင်းတင်းဆုပ်ခြေလိုက်တော့ လက်ထဲကမီးခဲဟာ ကြေမွပြီးသေသွားတယ်၊ မိုးမခအွန်းလိုင်းမီဒီယာ၊ သြဂုတ်လ၂၀၁၈။
၃။ ထက်လူအောင်၊ သြဂုတ်ဟာ မိုးတွေလိုရွာတယ်၊ မိုးမခအွန်းလိုင်းမီဒီယာ၊ သြဂုတ်လ ၂၀၁၈။
၄။ လူမျိုးလွင်၊ ၈၈၈၈၊ လွတ်လပ်လှိုင်းအွန်လိုင်းမီဒီယာ၊ သြဂုတ်လ၂၀၁၈။
မှတ်ချက်။ ။ သူရိယနေဝန်းဂျာနယ် Vol 1.No 211.Aug 18. 2018 မှာ ဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။